Indlu enegadi 3 imizuzu yokuhamba ukusuka elunxwemeni - I-Airbnb
Indlu enegadi 3 imizuzu yokuhamba ukusuka elunxwemeni
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguMarcelo
Indlu enegadi 3 imizuzu yokuhamba ukusuka elunxwemeni.
Ukuhlala okukhethekileyo kule ndawo, enegadi enkulu kunye nendawo efanelekileyo.
Ukuhlala okukhethekileyo kwindawo, enegadi enkulu kunye nendawo efanelekileyo.
Ukusuka eLa Casa Amarilla uya kuba nohambo lwemizuzu emi-3 ukuya e-Isla beach (140 m), kwaye unokuhamba uye elunxwemeni lwase-Ermita (450m), Bahía (900m), La Pava, Nares, njl. Zizilwandle ezilungele iintsapho okanye ukuziqhelanisa nemidlalo yasemanzini, kunye nokuba nemibono emihle kunye nemivalo emnandi yaselwandle.
Kwakhona, unokuthatha uhambo lwemizuzu eli-10 ukuya eBhayi apho uya kufumana amathafa, iivenkile zokutyela, iivenkile kunye nendawo egqibeleleyo ukuze ugqibezele ukuhlala kwakho.
Indawo yale ndlu ifanelekile ukufikelela kuzo zonke ezi ndawo ngaphandle kokukhathazeka ngokuhambisa imoto okanye ukupaka, kuba uya kuhamba yonke indawo.
I-Yellow House ikunika indawo yokuhlala ekhethekileyo. Kuyo ungonwabela amaxesha amnandi kwigadi yayo enkulu enezoso kunye nendawo eyaneleyo yokuthuthuzela wena kunye nosapho lwakho, nokuba uza nesilwanyana sasekhaya.
Indlu inesitulo esiphakamileyo kunye nebhedi yokuhamba.
IPuerto de Mazarrón ikunika iindlela ezininzi zokuzonwabisa kunye nokuzonwabisa, iilwandle kunye nezemidlalo, igastronomy kunye nomoya olungileyo. Uya kuchitha iholide epheleleyo kunye emangalisayo.
Iikhilomitha ezingama-35 elunxwemeni enalo nucleus yenye yezona zinto zinomtsalane zendalo kule ndawo. Fumana malunga nokhetho lwezifundo zokuntywila, iikhosi ze-surf, iindlela zokukhwela ibhayisekile ezintabeni ecaleni kwendlela ecaleni kwe-cove, ukurentwa kwezixhobo zemidlalo, njl.
Ukusuka eLa Casa Amarilla uya kuba nemizuzu emi-3 ukuya elunxwemeni lwaseLa Isla (140m), kwaye unokuhamba uye elunxwemeni lwaseLa Ermita (450m), Bahía (900m), La Pava, Nares, njl. Ezi lwandle zifanelekile kwiintsapho okanye ukuziqhelanisa nemidlalo yasemanzini, kunye nokuba nemibono emihle kunye nemivalo emnandi yaselwandle.
Kwakhona, unokuthatha uhambo lwemizuzu eli-10 ukuya kwizibuko apho uya kufumana iitesi, iivenkile zokutyela, iivenkile kunye nomoya ogqibeleleyo ukuze ugqibezele ukuhlala kwakho.
Indawo yale ndlu ifanelekile ukufikelela kuzo zonke ezi ndawo ngaphandle kokukhathazeka ngokuhambisa imoto okanye ukupaka, njengoko uya kukwazi ukuhamba yonke indawo.
ILa Casa Amarilla ikunika ukuhlala okumangalisayo. Apha ungonwabela amaxesha amnandi kwigadi yakho enkulu enebarbecue kunye nendawo eyaneleyo yokuthuthuzela wena kunye nosapho lwakho, nokuba uza nesilwanyana sasekhaya.
Indlu inesitulo esiphezulu kunye nebhedi yokuhamba yeentsana.
IPuerto de Mazarrón ikunika iindlela ezininzi zokuzonwabisa kunye nokuzonwabisa, iilwandle kunye nezemidlalo, igastronomy kunye nomoya olungileyo. Uya kuchitha iholide epheleleyo kunye nemnandi.
Iikhilomitha ezingama-35 elunxwemeni kule dolophu yenye yezinto ezinomtsalane zendalo kulo mmandla. Fumana malunga nokhetho lwezifundo zokuntywila, iikhosi zokusefa, iindlela zebhayisekile yeentaba ecaleni kwendlela ecaleni kwe-cove, ukuqesha izixhobo zemidlalo, njl.